Mpijery sary 10 tsara indrindra hisolo ny fampiharana Windows 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ny mpijery sary teratany Windows 10 dia tsy dia malaza amin'ny mpampiasa rafitra. Indrindra, noho ny faharetan'ny fanokafana sary sy ny fiarahana mifanaraka amina endrika vitsivitsy. Voafetra ihany koa ny fiasa fanovana misy.
Raha mitady fomba hafa amin'ny programa ianao dia nitanisa ireo mpijery sary 10 maimaim-poana tsara alaina ao amin'ny Windows PC anao. Zahao hoe!
1. Mpijery sary FastStone
Maivana sy mora ampiasaina, FastStone Image Viewer dia mamela anao hijery sary amin'ny efijery feno, zoom, ary hijery data EXIF. Ny fitetezana lahatahiry dia azo atao amin'ny alàlan'ny menio ambony. Ireo fitaovana dia misy ao anaty bara iray eo ambanin'ny efijery.
Mifanaraka amin'ny fanitarana am-polony, manolotra fiasa fanovana koa izy io. Anisan'izany ny fanapahana, famerenana ny habeny, ny fanesorana ny maso mena ary ny fanitsiana ny jiro. Azo atao koa ny manao fampisehoana slide, mampiditra lahatsoratra sy sticker amin'ny sary, ankoatry ny safidy hafa.
Mpijery sary FastStone (maimaim-poana): Windows 10, 8, 7, Vista ary XP.
Winaero dia manana asa am-polony am-polony amin'ny fanaingoana ny fikirana sy ny endrika Windows. Anisan'izany, misy ny safidy hitondrana ny mpijery sary sokitra rafitra ho an'ny Windows 10.
Mba hanaovana izany dia sokafy ny programa ary tadiavo Foto ao amin'ny boaty fikarohana. tsindrio eo Makà fampiharana mahazatra / Ampandehano ny sary Windows Viewr. Avy eo mankanesa any Ampandehano ny sary Windows Viewr.
Hoentina any amin'ny toerana misy anao ao anaty rindrambaiko ianao. Tsindrio ilay fampiharana voafaritra ao amin'ny Photo Viewer, ary ao amin'ilay lisitra miseho, mankanesa any Windows Photo Viewer. Eny, ho eo amin'ny safidy io, toy ny tamin'ny andro taloha.
Winaero Tweaker (maimaim-poana): Windows 10, 8 ary 7
Iray amin'ireo programa interface tsara indrindra ao amin'ny lisitray. ImageGlass dia manolotra loharano ho an'ireo izay mitady mpijery sary tsara, tsy misy fanampiny. Ny fampiharana dia ahafahanao mihodina ny sary mitsivalana sy mitsangana, ary koa manitsy ny sakany, ny haavony na hibodo ny efijery iray manontolo.
Azonao atao koa ny mampifandray ny fanitarana amin'ireo mpanova sary manokana, ohatra, manokatra fotsiny PNG amin'ny Photoshop. Azonao atao ihany koa ny misafidy raha hampiseho ny baraovana, ny takelaka momba ny haantsary ary ny afara maizina na zana-kazo.
Ny programa dia manohana rakitra amin'ny endrika maherin'ny 70, toy ny JPG, GIF, SVG, HEIC, ary RAW.
ImageGlass (maimaim-poana): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
Ny hazavana, haingana ary miasa dia teny afaka mamaritra ny JPEGView. Manasongadina ny sary ilay rindranasa, miaraka amina baraovana misy kisary minimalist sy mangarahara. Tsy miseho izany raha tsy mivezivezy eo ambanin'ny efijery ny totozy. Ny data momba ny sary, ao anatin'izany ny histogram, dia azo zahana amin'ny fipihana ny litera i.
Raha esorinao ny tondro, dia aseho ny safidy fanovana mahaliana sasany. Anisan'izany ny fitaovana fanitsiana ny fifanoherana, ny famirapiratana ary ny mahasosotra, ny fiovan'ny alokaloka ary ny manjavozavo. Izy io dia manohana endrika JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF ary TIF.
JPEGView (maimaim-poana): Windows 10, 8, 7, Vista ary XP
5. 123 Mpijery sary
123 Photo Viewer dia misongadina amin'ny fanohanany ireo endrika sarotra hita amin'ny mpijery sary hafa an'ny Windows, toy ny LIVP, BPG ary PSD. Ny fampiharana dia ahafahanao manao zoom miaraka amin'ny tsindry tokana ary manana hitsin-dàlana fitendry mba hampiasaina mora foana.
Ankoatr'izay dia manana lahasa fanovana isan-karazany toy ny sivana, fampiraisana sary ary fampidirana lahatsoratra izy io. Ny programa dia manohana ny fanitarana sary mihetsika, toy ny GIF, APNG, ary WebP. Ny hany lesoka dia ny fiatrehana ny doka kinova voaloa eo amin'ny efijery an-trano.
123 Mpijery sary (maimaim-poana): Windows 10 sy 8.1
IrfanView dia mpijery maivana sy mora ampiasaina miaraka amin'ny bokotra mora idirana hanaovana pirinty, mamaky ampahany amin'ny sary ary mijery ireo mombamomba ny EXIF. Ny programa dia manana endrika fiovam-po endrika, toy ny PNG ka hatramin'ny JPEG mora foana.
Azonao atao koa ny mampiditra fari-drano, mampiditra sisin-tany ary manamboatra fanitsiana loko. Mbola mikasika ny fanovana, ny mpampiasa dia afaka manova ny habeny sy manodina ny fisie, mampiditra sivana sy vokany ary manova loko iray hafa aza.
Ny fampiharana dia mety tsy ho toy ny intuitive ho an'ireo izay tsy manana fanandramana fanovana. Ary, raha hampiasa azy amin'ny teny Portiogey, mila misintona sy mametraka fonosana fiteny azo alaina avy ao amin'ny tranonkalan'ny developer ianao. Fa haingana ny fizotrany.
IrfanView (maimaim-poana): Windows 10, 8, 7, Vista ary XP
Fonosan'ny fiteny IrfanView
XnView dia mpijery sary hafa izay tonga miaraka amina endri-javatra fanampiny. Na dia tsy iray amin'ireo safidy mpinamana indrindra amin'ny resaka fampiasana aza izy io, dia mifanaraka amin'ny endrika maherin'ny 500 izy io ary mamela ny hetsika ataon'ny batch. Eo anelanelan'izy ireo dia omeo anarana indray ary ovao indray ny rakitra maro indray mandeha.
Azonao atao koa ny manova ny habeny sy manangona sary, manintona azy ireo ary manitsy ny maso mena. Misy ihany koa ny mety fanitsiana ny lafiny toa ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny mahasalama, ny alokaloka, ankoatry ny hafa.
XnView (maimaim-poana): Windows 10 sy 7
Maivana sy mora ampiasaina, manasongadina ireo fiasa fototra andrasana amin'ny mpijery sary ny HoneyView. Izany hoe, zahao sy hivoaha, ahodino ny sary dia mankanesa any amin'ny manaraka na miverena amin'ilay teo aloha.
Ny fampahalalana EXIF ​​dia azo alaina haingana amin'ny alàlan'ny bokotra iray eo ankavanan'ny efijery. Ankoatry ny fananana fiovam-po endrika endrika batch, ny programa dia mamela anao hijery rakitra voageja nefa tsy mila decompress azy ireo.
HoneyView (maimaim-poana): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista ary XP.
Nomacs dia manana endrika mampatsiahy ilay mpijery sary Windows mahazatra. Noho izany, izay rehetra tia ny programa Microsoft dia tokony tsy hanana fahasahiranana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity. Raha ny fampisehoana ihany dia mamela anao hanova mora ny maody eo anelanelan'ny efijery feno, 100% na voalohany.
Azo atao koa ny manodina, manova ny habeny ary manangona ny sary amin'ny alàlan'ny bokotra asongadina. Ny rindrambaiko koa dia manolotra fitaovana fanovana isan-karazany toy ny fanitsiana saturation, famoronana sary famantarana PC, sns.
nomacs (maimaim-poana): Windows 10, 8, 7, Vista, XP ary 2000
Ny mpijery an-tserasera tokana ao amin'ny lisitray, Google Photos dia mety ho safidin'ireo izay te-hitahiry ny rakitra rehetra amin'ny toerana iray. Ny rindranasa finday dia mamela anao hamerina maka sary ho azy azy ireo ary hiditra ao amin'ilay browser.
Raha tianao dia azonao atao koa ny mampakatra ireo sary voatahiry ao amin'ny PC sy Google Drive mankany amin'ny kinova an'ity programa ity. Ny serivisy dia mikaroka lohahevitra sy toerana ary fitaovana fanovana tsotra. Izy io koa dia manana fivoriambe mandeha ho azy sy fahatsiarovana tamin'io andro io tamin'ny taona lasa.
Ny mety ho lesoka ho an'ny sasany dia ny filàna fifandraisana Internet hampiasana azy.
Sary Google (maimaim-poana): Web
Apetraho ho mpamadika ny mpijery sary vaovao
Windows dia mamaritra ny programa ny rafitra zanatany ho mpijery default. Izany hoe hampiasaina hanokafana azy ho azy ny sary rehetra. Raha hiova amin'ny programa alaina dia araho fotsiny ireo dingana etsy ambany:
1. Kitiho havanana sary, ary amin'ny menio misokatra dia kitiho Misokatra amin'ny;
2. Raha mbola mijery ilay seho ao amin'ilay lisitra aseho ianao, dia fidio Mifidiana fampiharana hafa;
3. Alohan'ny tsindrio ny kisary programa dia zahao ny boaty eo akaikiny Ampiasao hatrany izany fampiharana manokatra rakitra .jpg (na inona na inona ny fanitarana sary);
4. Tsindrio izao ny programa ary hamafiso ny Okay.
Raha tsy hitanao ny anaran'ny programa dia alao horonan-taratasy ilay lisitra ary mandehana mankany Fampiharana bebe kokoa. Raha mbola tsy hitanao dia kitiho Mikaroha fampiharana hafa amin'ity PC ity. Ao amin'ny boaty misokatra, soraty ao amin'ny bara fikarohana ny anaran'ilay programa.
Rehefa hitanao dia tsindrio ilay izy avy eo ny bokotra misokatra. Avereno indray ireo dingana etsy ambony, ny fampiharana dia ho tafiditra ao amin'ireo safidin'ny fampiharana.
Mpilalao horonan-tsary tena tsara ho an'ny PC sy Mac